Cubot ID206, smartwatch ọhụrụ na Alexa yana nnwere onwe nke ụbọchị 18 maka ihe na-erughị euro 33 | Gam akporosis
Cubot amalitela igwe ihe ngosi ọhụrụ akpọrọ ID206 ma na ere ere na ublọ Ahịa Cubot. Iji mee ka ngwaọrụ ahụ mara ihe, ID206 na-abịa na njikwa njikwa olu Alexa na igwe okwu arụpụtara. Ihe omume a na - eme ka Cubot ID206 pụta ìhè n’etiti ọtụtụ smartwatches.
Elekere ID Cubot 206 gụnyere ihuenyo 1,7-inch TFT-LCD ụdị dị ire, nke nwere etiti alloy nke etiti. Dochie okpokoro a gbara okirikiri na okpokoro dị larịị iji mee ka usoro elekere nke elekere ahụ dịkwuo mma, nke a na-enye ya ohere ịkarị ejiji, ejiji.
1 Alexa dị ka ebe siri ike
2 Akụkụ ndị ọzọ nke Cubot ID206
3 Nnukwu nnwere onwe
4 Ihe elekere
Alexa dị ka ebe siri ike
Isi okwu nke Cubot ID206 bụ ojiji nke njikwa ụda olu nke Alexa. Ugbu a ị nwere ike iji Alexa chịkwaa ụlọ gị nwere ọgụgụ isi na iwu olu, ma ọ bụ ịlele oge, ịchịkwa egwu ma mee ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na iwu, na-enweghị ịpị ihe ọ bụla.
Alexa na ID206 ga-arụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụ ihe dị oke mkpa iji nwee ike iji smartwatch site na iwu olu yana na-enweghị pịa na ihuenyo. Amazon's Alexa emeela AI, na-enye nnukwu ọrụ ma a bịa n'iji elele Cubot.
Akụkụ ndị ọzọ nke Cubot ID206
Nlekere ID206 na-agbakwunye ụdị egwuregwu 14, ma ọ bụ n'èzí dị ukwuu ma ọ bụ n'ime ụlọ, ọ na-aga n'ihu na-achọpụta mmegharị ahụ, nyochaa ụda obi, na tụọ calorie ọkụ. Oge elekere na-agbakwunye mmiri na-egbochi mmiri nke mmiri ruo mita 50 miri emi maka onye ọrụ kwa ụbọchị ma ọ bụ ọrụ mmiri na-emighị emi, jiri ya na osimiri, ọdọ mmiri na ebe ndị ọzọ.
Cubot ID206 na-abịa na ọtụtụ atụmatụ na-elekwasị anya na ahụike nke ndị ọrụ. Enwere ike nyochaa nlezianya nke data ahụike site n'inye nlebara anya oge elekere 24, nlekota ikuku oxygen, nlekota ura, nlekota nche, wdg.
Oge nche na-abịa na ụfọdụ ihe ncheta, nke gụnyere ịnọkarị otu, ncheta ị drinkụ mmiri na ncheta nke oge ịkwaga. Ndị a yiri ọnọdụ, mana ọ bụ nhọrọ zuru oke ma ọ bụrụ na ahazi ya site na mbido, otu oge smartwatch malitere.
Ihe nlere ohuru nke Cubot nwere nnwere onwe dị ukwuu maka batrị ya, ID206 biara na batrị 300 mAh, nke ruru ụbọchị 18 na ojiji nkịtị na ụbọchị 55 na ọnọdụ nche bụ isi. Ọ bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa, nke inwe ike ịnwe batrị nke ga-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu atọ na-enweghị ibu ọrụ gara aga.
Nke ịchọ iji nche n'ụzọ dị mkpa, ọ kachasị mma itinye ọnọdụ nkịtị ma ghara iji nhọrọ dị iche iche Cubot ID206 nwere. A na-akpọ elekere site na imewe ka ọ bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ n'ezie ma bụrụ nke ndị ọrụ ji kpọrọ ihe nke ukwuu, ndị na-ahụ nnwere onwe dị ka otu n'ime ihe ndị bụ isi.
Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọtụtụ ọrụ dịka njikwa egwu egwu, ịkpọ oku na ozi, yana ihe karịrị 50 na-eche ihu na igwe ojii ka ị nwee ike ịgbanwe ya ma jikọta ya na ụdị gị niile. Na-agbanwe agbanwe dị mfe dịka ịga ntọala, họrọ ọhụụ ọhụrụ ma nabata ịchekwa mgbanwe ndị ahụ.
Ihe ọhụrụ Cubot ID206 nwere ụfọdụ nha nke dị 40mm site 12mm, ebe eriri silicone bụ 20mm. Ibu elekere dị ala n'ezie, ịbụ nhọrọ mara mma mgbe ijikọtara ya na uwe ma were ya gaa ihe omume kachasị mkpa na-enweghị mgbagha.
Site na imepụta ihe na-echetara ọtụtụ ngwa ngwa dị ugbu a, Cubot ID206 na-achọ ibuli elu, na-enye ọtụtụ atụmatụ ndị a na-emebu na ọnụahịa asọmpi. Igwe elekere ga-enyocha ihe niile dị na nkwojiaka, na-ewere obere ohere, dị ka a ga - asị na ọ bụ elekere anya.
ID Cubot 206 dị na ojii na pink, ma na-aga n'ihu ere ya Ublọ ahịa Cubot na ọnụahịa na-amalite na $ 54,99. Otú ọ dị, ndị mbụ na-azụ 400 nwere ike inweta ya nnukwu ọnụahịa ego nke euro 32,99. Tinye koodu "DEALID206" na ndenye ọpụpụ iji belata ọnụahịa. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, egbula oge ịzụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Cubot ID206, smartwatch ọhụrụ na Alexa na nnwere onwe nke ụbọchị 18 maka ihe na-erughị euro 33
Kedu ihe bụ bloatware na otu esi ewepụ ya na gam akporo